IsiTaliyane sihlanjwe ngetekisi, iitrob kunye neentongisi Esi sidlo sinqabile konke okulindelekileyo. Ukuhlanganiswa okupheleleyo kweeshizi, i-thyme, i-almonds edibeneyo, ipolisi enomsila kunye nomuncu omuncu kunye namanqaku athile eoli yomnquma kunye ne-crispy crumb ayiyi kushiya nabani na ongenamdla. Unokuzilungiselela ngokukhuselekileyo inxalenye ephindwe kabini, ngenxa yokuba izithako zinikezelwa kwiipilisi ezi-4 ezipakwe. Kuyinto enqwenelekayo ukusebenzisa i-Cheddar ushizi, kuba ine-flavored cheese ecebileyo kunye nesakhiwo esinokutshabalalisa. Isidlo esinqabileyo nesingakulibaleki siya kuthatha imizuzu engama-30 kuphela ngexesha lakho, ngokuqwalasela ukucocwa kwama-alimondi kunye nokukhethwa kwepilisi. Ukuba uyenze ngokugqithiseleyo umpompe uyifumene, uya kufutshane ixesha lokupheka.
Isonka esimhlophe 150 g
Cheddar ushizi 50g
I-Thyme (Thyme) entsha 7 g
Ityuwa 3 tsp.
Iviniga ye-Apple 1 tbsp. l.
I-sweet pepper 4 ipcs.
Amanzi abilayo 1 l
Inyathelo 1 Ukulungiselela isitya, uya kufuna ipilisi entle, isinkwa esimhlophe, i-thyme, i-Cheddar ushizi, i-almonds, ioli yeoli, ityuwa, iswekile, umnyama omnyama kunye neviniga.
Inyathelo 2 I-Pepper kwaye uhlambuluke kwiimikhomo kunye nomxholo.
Inyathelo 3 Ngoku kufuneka udle inyama yepilisi. Ukwenza oku, uthele imitha emithathu ngamanzi abilayo, uze uhlanza phantsi kwamanzi abandayo malunga nomzuzu.
Isinyathelo 4 Bilisa i-marinade. Ukwenza oku, ubilise 1 litre lamanzi uze ungeze isipuni sesityuwa, iswekile, i-teaspoon yeviniga, iqabunga le-bay, i-pinch of pepper emnyama.
Inyathelo 5 Thela i-marinade pepper uze ushiye imizuzu eyi-10, udibanise ipoyileji yeoli yeoli. Emva koko i-brine kufuneka icutywe.
Inyathelo lesi-6 Nangona i-pepper isetyenziselwa ukulungiselela i-almonds: gweba kwaye yome epanini.
Inyathelo lesi-7 Kwi-blender, ugaye isonka kunye ne-alimondi.
Isinyathelo 8 Bese wongeza ishizi, i-thyme, ityuwa, i-pepper kunye nokugaya.
Isinyathelo 9 Ngomxube weeshizi kunye notshani faka isipuni seoli yeoli, i-teaspoon ye-aple cider viniga kunye nokuxuba.
Inyathelo 10 Gcwalisa i-pepper nganye uze ubeke kwisitya sokupheka.
Inyathelo 11 Ukucoca isisele esele phezulu, uphefeze ioli yeoli (ukwenzela ukuba imvuthuluka igxobhozwe kwaye ibhaka). Emva koko uhobise ngamanqwanqwa amaqabunga e-thyme kwaye usithumele kwi-oven esandulele ukuya kwi-180 ° C imizuzu eyi-15.
Isinyathelo 12 Iipilisi ezibhakabini zingasetyenziswa zitshisa kwaye zibandayo kunye namazambane, ilayisi, i-pasta okanye isitya esizimeleyo.
Iifama ze-almond zesiFulentshi Imali
Ikhekhe le-Irish Chocolate
Ixesha elidala elixelayo kwixesha leKrisimesi ekutshatileyo: iindlela ezi-6 ezivela kumlumbi ozuze ilifa
"Jet Fresh" ngobudlelwane boSondo
Ukuthengwa kwe-Spring ukusuka kulandelayo: iifowuni nganye
Ikhekhe lepukkin kunye nekhekhelethi
Ukuqhawula umtshato emva kobugwenxa
Ukutshata akusinakubekezeleka: ingubo yomtshato wesibini
Ama-Aromas ngeempawu ze-zodiac
Ukuxhatshazwa kwabasetyhini: isifo okanye isiqhelo?
Indlela yokwenza imini yokwenza